अनकन्टार यात्रामा महन्थ ठाकुर : न जसपा, न राजपा, अब कता ? - Janadesh Khabar
अनकन्टार यात्रामा महन्थ ठाकुर : न जसपा, न राजपा, अब कता ?
अदालत जाने बाटो भने खुला
राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेर महन्थ ठाकुर अहिले दलविहीन छन्। उनले चाहँदा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा मा बस्न त सक्छन्, तर अहिले त्यो उनको चाहना होइन। त्यसैले पुरानो पार्टी राजपाको विरासत छाडेर जसपा बनाएका ठाकुर बिलखबन्दमा छन्। यद्यपि, नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरिरहेको ठाकुर समूहका नेताहरु बताउँछन्।
साउन ११ गते निर्वाचन आयोगले गरेको ‘हेड–काउन्ट’मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा दुईतिहाइ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य खुलेपछि अध्यक्ष ठाकुर पक्षले जसपाको नाम र चुनाव चिन्ह गुमाएको हो।
‘निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि हामी नयाँ परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भनेर पार्टीमा छलफलमै छौंँ,’ शुक्लाले भने, ‘अर्को हप्तासम्म निर्णय गरिसक्छौँ।’
‘अहिलेसम्म साथीहरुले आयोगमा दर्ता भएका सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा वा अरु कुनै नयाँ नाम दर्ता गरेर जान सुझाउनुभएको छ,’ शुक्लाले थपे, ‘त्यसका लागि हाम्रो कार्यकारिणी समितिका साथीहरुसँग छलफल गर्छौँ।’
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार राजपा नाम असार २५ गते नै एक व्यक्तिले दर्ता गरिसकेका छन्।
उता राजपाको चुनाव चिन्ह पनि नेपाल सद्भावना पार्टीले लिन निवेदन दिइसकेको छ।
ठाकुरले असार दोस्रो हप्ता यादव पक्षका २० कार्यकारिणी सदस्यलाई निष्कासन गरेर आफ्ना पक्षका थप गरेका थिए। तिनै थप गरेका कार्यकारिणी सदस्य लिएर ठाकुर नयाँ नामको विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
आयोगको निर्णयपछि ठाकुरपक्षीय नेताहरुको समीक्षा बैठक पनि बसेको थियो। कानुनी त्रुटीलाई आयोगले सदर गरेकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि छ।
‘केन्द्रमा जसपा बने पनि प्रदेश र जिल्ला तहमा समायोजन भएन, राजपा र सपाकै हैसियतमा काम कारबाही हुँदै आएको छ,’ ठाकुरपक्षीय एक नेताले भने, ‘केन्द्रमा पार्टी एक भए पनि प्राय सबैतिर अलग–अलग काम हुँदै आएको छ, खासमा जसपा बनेकै छैन। त्यसैले राजपालाई नै अघि बढाउन पर्छ।’
२०७७ वैशाख १० गते मध्यराति तत्कालीन सपा र राजपाबीच एकतापछि बनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका नामहरूलाई नै आयोगले आधार मानेर निर्णय सुनाएको थियो। जसले गर्दा ठाकुरले बहुमत गुमाए।
उपेन्द्र यादव–डा। बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद भने सत्ता पक्षीय कुर्सीमा बसिरहेका छन्।
उपेन्द्र यादव–डा।बाबुराम भट्टराई पक्षमा खुलेका केही नेताहरु शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि भने आफूहरुतिर फर्किने आशा ठाकुर पक्षको छ।
जसपा विभाजन भएपछि ठाकुर पक्षमा रहेका सांसदहरुको अवस्था के हुन्छ त ?
तर, ठाकुर पक्षलाई अदालत जाने बाटो भने खुला नै छ। फरक पार्टी, फरक चुनाव चिन्ह र फरक घोषणा पत्र लिएर चुनाव जितेर पछि एकता प्रक्रियामा आएका पार्टीहरुको विभाजनमा अदालतले फरक फैसला दिनसक्ने नेताहरु बताउँछन्।
१४ साउन २०७८, बिहीवार २२:०१ बजे प्रकाशित
कांग्रेस: क्रियाशील सदस्यता विवाद ५ दिनभित्र टुंग्याउने जिम्मा
‘न्यायाधीश नियुक्तिबाटै सुरु हुन्छ अदालतमा भ्रष्टाचार’